IMONTY PYTHON KUNYE NEGRAIL ENGCWELE KUNYE NECOCONUT YESINGESI YAMAXESHA APHAKATHI - UMNIKELI
Ingxondorha Yenja Enkulu Ebomvu
Iicoconuts zaseNgilani zamaxesha aphakathi zazingafane zenziwe njengeMonty Python kunye neGrail eNgcwele ekwenze wacinga
Iminyaka engamashumi amane ubudala kulo nyaka, umzobo we coconut in IMonty Python kunye neGrail eNgcwele inokuba yenye yezona ndawo zibalaseleyo zokuvula kwimbali yefilimu. Iintsika zentsimbi, uArthur, uKumkani waseBritane, ubonakala ekhwele ihashe lokucinga njengomntwana kwibala lokudlala. Isicaka sakhe esithembekileyo, uPatsy, uhamba naye, edibanisa iihafu ezimbini zekhokhonathi kunye ukwenza isandi seempuphu zehashe. UArthur noPatsy bazimisele kakhulu malunga nokufuna kwabo. Ngabo kuphela abakhoyo.
Indawo yonke igxile kwezi coconut. Indoda ebekiweyo ethe ngqo kwifilimu, uArthur, ngokuzama ukuzama ukucacisa ubukho beecoconut kwiNgilane yamaxesha aphakathi (ngebabeqhutywa). I-grail ihlala yonke kodwa ilibalekile njengoko oonogada abakwiindonga zenqaba beqhekeza iingcaciso zakhe. (Ngaba ucebisa ukuba iicoconut zifuduke?)
Umzobo wekhokhonathi ukhupha umsebenzi wokuhlekisa. Umdlalo wamahlaya uchaza into engenakuphawulwa ngayo, engathethwayo, kunye nengathethekiyo. Ubuze be-Emperor buhlekisa ngonaphakade. Iikhokhonathi zikaMonty Python ngamahashe, ngaphandle kokuba azingomahashe, kodwa zii coconut. Okubi ngakumbi, ziikhokhonathi, kodwa iikhokhonathi azinakubakho kwi-England yase-Arthur ephakathi.
ukungqingwa kwe-dragonspear trans trans
La mahashe ekhokhonathi angenakwenzeka ahambelana ngqo nomdlalo bhanyabhanya, kwaye ngokunjalo nomzobo, njengaphambi kokuba anyanzelwe ukuba ahlolisise igqwirha, uSir Bedevere uzama ukubhabha igwinya eligcwele ikhokhonathi. Abaphulaphuli bashiyeke kwimithungo kwaye baqiniseke ngokupheleleyo ngokungenakwenzeka kweekhokhonathi ezikhoyo eNgilane yamaxesha aphakathi.
Ngaphandle kwamaxesha aphakathi iNgilane yayihluthi kunye neecoconut. Hayi, ngenene, kwaye iMonty Python inokuba iyayazi.
Bangamadoda e-Oxbridge, emva kwayo yonke loo nto, kwaye iikholeji ezininzi zaseOxford naseCambridge zisalondoloza iikhokhonathi abazinikiweyo kwinkulungwane yeshumi elinesihlanu. Nantsi indebe yekokonathi yenkulungwane yeshumi elinesihlanu eze eOxford kutshanje. Ngelixa iinxalenye zayo bezongezwe kutsha nje, izinto zentsusa ziphakathi. Le kuphela kwendebe yamaNgesi yamaxesha aphakathi eboniswe kwi-Intanethi, kwaye ibonisa indlela iqokobhe elalibotshelelwe ngayo kwifom yokusela usebenzisa ihashe lesilivere okanye igolide. AmaNgesi aqhubeka esenza iikomityi zecoconut emva kwexesha lamaxesha aphakathi-kwi Ishumi elinantandathu inkulungwane, Ishumi elinesixhenxe kwinkulungwane, kunye ngaphaya . Babebaninzi ngokwaneleyo ukuba ngenkulungwane yeshumi elinesihlanu, amakhaya ngamanye anokuziqhayisa ngeekomityi ezininzi zecoconut. Omnye othobekileyo wabalaselisa udumo lweekomityi xa wayenqwenela ikomityi yakhe yekhokhonathi kwindlalifa yakhe emsila oyindoda, njengendawo yeBennett Ikratshi nomkhethe okanye indawo kaCrawley kwi UDownton Abbey.
Kodwa kutheni usenza iibhombu zegolide zobunewunewu ngeecoconut? Kwaye bafike njani kumaxesha aphakathi eNgilane, ukuba iinkonjane aziziphathanga?
KumaXesha Aphakathi, iintende zesundu zecoconut zazingekasasazeki njengokuba zinjalo namhlanje. Ikhokhonathi zikhula kwiiMaldives zabo, eIndiya, kwaye mhlawumbi iinxalenye zentshona Afrika kunye nakuMbindi Mpuma. (Babekhula kwintshona yoMbindi Merika, kodwa babezifikelele apho, bewela i-pacific njengezikhephe ezincinci ezinencasa ngaphandle kokuginya.) Iicoconuts zazisoloko ziyinxalenye yorhwebo ngaphesheya koLwandlekazi lwaseIndiya ukusuka kumaxesha amaRoma, Urhwebo lubonakala luqhubekile nokuphazamiseka okuthe ngqo kumaxesha amandulo naphakathi. Ukunikezelwa kwimbali yaseNgilani yamaRoma, akunakwenzeka oko Ubomi bukaBrian- Ixesha lesiNgesi lisenokuba nakho ukufikelela kwiicoconuts. Ezi coconut zazingahanjiswanga yonke loo ndlela zenziwe ngeekomityi, nangona kunjalo. Baye bathathwa njengamayeza.
Ukuqala rhoqo kwakhona kwinkulungwane yeshumi elinesine neyeshumi elinesihlanu, iikhokhonathi ezingamayeza zafika eNgilane. Ngeli xesha, zazipakishwe kwimikhumbi yeVenetian kunye nobunewunewu ukusuka kwisilika ukuya kwiswekile, kwaye ecaleni kwezilwanyana zasekhaya ezinje ngeenkawu kunye nezikhwenene. Ngokunjalo, iiVenetians zafumana iikhokhonathi ezivela e-Aleksandriya nakwiinethiwekhi ezifanayo zorhwebo ezazikade ziyinxalenye yekhokhonathi kule nkulungwane. Babengabizwa ngokuba ziicoconut, nazo. Igama lekhokhonathi livela kwisiPhuthukezi kwaye laqala kwinkulungwane yeshumi elinesithandathu neshumi elinesixhenxe-emva kwexesha eliphakathi. KumaXesha Aphakathi, iYurophu yayisazi ikhokhonathi njengeNut yaseIndiya okanye iGreat Nut. Yayiyinto enkulu, enkulu yokutshiza nut eyayithuthwa isuka eIndiya-eyona nut yayinkulu ngokwaneleyo ukwenza ikomityi yokusela.
Kuninzi kakhulu ngeNkcazo yeSwallow, emva koko. Kodwa kutheni ubenza babe ziibhokhwe ze-deluxe? Impendulo apha ibonakala iyisiko laseNgilani lokuthwala imithi. Ngokwembali zimbalwa ezinye iinkcubeko ezazakha iigobolondo ezishiyekileyo kwiicoconut zonyango ukuya kwitafile yokunethezeka. Iikomityi zecoconut zenziwe kwi-Yurophu yamaxesha aphakathi, kodwa zihlale ikakhulu kwiindawo ezinemikhuba ebalulekileyo yemithi: iJamani, iNetherlands neNgilani. Ngelixa iikomityi zecoconut zaseJamani nezaseDatshi zikhona etyebileyo , Iikomityi zesiNgesi zicociwe ngokugudileyo, njengoko kunjalo ngeempahla zazo zomthonyama ezintle. AmaNgesi ayonwabela ngakumbi izitya zokusela ezijikiweyo zemephu mazers , Ihonjiswe ngeziqwenga zemilebe kunye nemilebe engafaniyo neekomityi zecoconut. Ngapha koko, kanye njengokuba umthi omncinci ungaguqulwa ube sisitya, sinobungqina kumaxesha aphakathi ukuba iikomityi ezingabizi kakhulu zecoconut zenziwe nangesinyithi esingaxabisekanga njengobhedu kunye nepewter, nangona kungekho mizekelo yezi kopi zecoconut isaphulelo zihlala namhlanje.
Iicoconuts ziyavela kumaxwebhu amasiko esiNgesi, umyolelo, kunye nee-inventri ukusuka kwinkulungwane yeshumi elinesithathu ukuya phambili. Akunqabile, kodwa ziqhelekile. Iikomityi zecoconut ezenziwe nge-Copper- kunye ne-pewter ngekhe zibenokubaluleka ngokwaneleyo ukuba zivele kumyolelo, kodwa kuyacaca ukuba zazikhona nazo, kwaye mhlawumbi ngamanani amakhulu kunabalingani bazo ababutofotofo. Ngo-1500, iikhokhonathi zaziyinxalenye yenkcubeko yamaNgesi, ubuncinci kubantu abakumgangatho ophakathi naphezulu, iminyaka engama-200 ubuncinci — kwakungekho nkonjane ifunwayo.
Qhubeka ke, Arthur. Mhlawumbi wena uyenzile bafumane, kwaye isiqhulo sasiphezu kwethu emva kwayo yonke loo nto.
* Eli nqaku lisekwe kuphando oluza kupapashwa njenge-Medieval English Coconut kwiphephancwadi elizayo Iglobe yamaxesha aphakathi .
UKathleen E. Kennedy ngugqirha ophakathi ofundisa uncwadi kunye nembali kwaye ubhala malunga neencwadi zamaxesha aphakathi kunye nabahlaseli beekhompyuter. Unokufumana ulwazi ngakumbi ngaye nangokubhala kwakhe Apha , okanye ungabona ukuba uphezu kwantoni Kwi-Twitter .
isaphetha senf kunye nentolo yentombazana
Phawula i-ruffalo infinity yemfazwe eyonakalisayo
ndinxilile imbali mr. rogers
U-liam neeson wayengutitshala
IKrisimesi ngoDisemba wow wow wow
amakhadi amnyama angcono ngokuchasene nobuntu